आफ्नै व्यावसाय सुरु गर्दै आयुष्मान-प्रियंका ! « Ramailo छ
आफ्नै व्यावसाय सुरु गर्दै आयुष्मान-प्रियंका !
लभ वर्ड प्रियंका कार्की र आयुष्मान देशराज जोशीले चाँडै नै आफ्नो व्यावसाय सुरु गर्ने भएका छन् । प्रियंकाले जुत्ता र ब्याग पसल खोल्ने सोच बनाएकी छन् भने आयुष्मानले जेन्स ड्रेस सप खोल्ने बताए ।
बुधबार दरबारमार्गमा रहेको ब्राण्डेड सपको केट काट्ने क्रममा आयुष्मान प्रियंकाले यस्तो बताएका हुन् । तर कहिले बाट यस प्रकारको व्यावसाय सुरु गर्ने भन्ने चाहिं तय भैनसकेको दुवैले बताए । ‘ढिलो चाँडो हामी आफ्नै व्यावसाय पनि सुरु गर्छौं’, आयंन्काले भने ।
निरा जोशीले सञ्चालनमाा ल्याएको ब्रान्डेड सपको उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले रिवट काटेर गरिन् । उक्त सपको साँझ मा बुधबार दिनभर जसो सेलिव्रटीको आवातजावत रह्यो । नायिका बर्षा राउत, वेनिशा हमाल, गत सालकी मिस नेपाल निकिता चन्दक लगायत उक्त सपमा पुगेर निरालाई शुभकामना दिए ।
विश्वको शिर्ष चालिसमा पर्ने ब्राण्डेड सोरुममा हडा ,ब्युटी, भिक्टोरिया, गुस्सी,डायर जस्ता विश्वको उत्कृष्ट ब्राडका पर्फियुम पाइन्छ ।